Rotary စားပွဲတင် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှ Rotary စားပွဲတင် အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
YU WEI INDUSTRY SUPPLY CO., LTD. တွင်တည်ရှိသည် Taiwan။ ကျနော်တို့၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ရာတွင်ပါဝင်နေတဲ့ professional စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ Rotary စားပွဲတင်။ ကျနော်တို့အမြဲပြောင်းလဲနေတဲ့စျေးကွက်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ထုတ်ကုန်များကျယ်ပြန့်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆောင်မှုအမိန့်ကိုကြိုဆိုကြသည်။ ကျနော်တို့ ပို. ပို. အတန်းမြင့်ထုတ်ကုန်များထူးချွန်ဝန်ဆောင်မှုဈေးအချိန်နှင့်တပြေးညီပေးပို့အပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့နိုင်ငံတကာစျေးကွက်ရှယ်ယာပိုမိုချဲ့ထွင်ကြသည်။ ကျေးဇူးပြု ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုသည့်အချိန်တွင်မဆို။
ပုံစံ - GX-P 210P
Worktable အချင်းØ170, Ø210, Ø255
အမြင့်ကြီးတွေသုံးပါ-တိကျသော crossed roller ဝက်ဝံ.
မြင့်မားသောထိရောက်မှုကိုလက်ခံပါ,မြင့်မားသောသွားအတိမ်အနက်ကို double ခဲတီကောင် drive ကို.
Worktable အချင်း: Ø၂၁၀ မီလီမီတာ
N.W. (servo motor ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်သည်):၅၇ ကီလို
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cnclathemachine.com.tw/my/rotary-table.html
အကောင်းဆုံး Rotary စားပွဲတင် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် Rotary စားပွဲတင် မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ